Fomba 8 hamoronana atiny mamorona mpanjifa | Martech Zone
Tao anatin'izay herinandro vitsivitsy lasa izay, nandinika ny atin'ny mpanjifanay rehetra izahay mba hahalalana ny atiny izay mitondra ny fahatsiarovan-tena, ny fandraisana andraikitra ary ny fiovam-po indrindra. Ny orinasa rehetra manantena ny hahazo fitarihana na hampitombo ny orinasan-tserasera dia tokony hanana atiny. Miaraka amin'ny fahatokiana sy ny fahefana no fanalahidy roa amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana sy ny atiny dia manery ireo fanapahan-kevitra ireo amin'ny Internet.
Raha ny voalaza dia mila jerena haingana fotsiny ny anao Analytics alohan'ny hahalalanao fa ny ankamaroan'ny atiny dia tsy mahasarika na inona na inona. Raha jerena ny vidin'ny fananganana tranokala, ny fanatsarana ny tranokala, ny fikarohana ny tsenanao, ary ny famokarana izany atiny izany - mahamenatra ny famakiana azy io matetika.
Izahay dia mifantoka amin'ny paikadinay amin'ity taona ity ny paikadinay mba tsy hampiasam-bola mihoampampana ny atiny rehetra. Fomba vitsivitsy ataontsika hanatsarana ny atin'ny mpanjifanay:
Aggregation - Nandritra ny taona maro, ny sasany amin'ireo mpanjifanay dia nanangona lahatsoratra am-polony amina lohahevitra mitovy amin'izany. Ataonay ao anaty lahatsoratra feno ireo lahatsoratra ireo izay voalamina tsara sy mora zakan'ny mpamaky. Avy eo izahay dia mamily ny URL rehetra tsy ampiasaina amin'ny lahatsoratra feno ary mamoaka azy vaovao miaraka amin'ny URL ambony indrindra.
fifindra-monina - Ny sasany amin'ireo mpanjifanay dia mamokatra lahatsoratra, podcast ary horonan-tsary - samy hafa daholo. Lafo ary tsy ilaina izany. Ny iray amin'ireo programa naorinay dia manana ny mpanjifanay ao anatin'ny iray volana isam-bolana handraketana podcast vitsivitsy. Rehefa manoratra ireo podcast izahay dia manoratra azy ireo amin'ny horonan-tsary ihany koa. Avy eo izahay dia mampiasa ny fandikana ireo dinidinika ireo mba hamahanana ireo mpanoratra anay hampivelatra ny atiny. Rehefa mihamitombo ny zava-bitan'ny atiny, dia mety hampiasa infografika sy whitepapers aza izahay hanitarana ny valiny ary avy eo hanome fampiroboroboana mba hanitarana ny tratran'izy ireo.
Enhancement - Betsaka ny lahatsoratra voasoratra tsara fa lany andro na tsy misy sary. Miasa hanatsara ireo lahatsoratra ireo izahay, ary mamoaka azy ireo amin'ny URL mitovy amin'ny lahatsoratra vaovao ihany koa. Maninona no manoratra lahatsoratra iray vaovao tanteraka ho an'ny lohahevitra iray nomena ny ezaka efa natao?
Ireo dia paikady telo ampiasainay mba hampiroboroboana atiny mahomby kokoa. Ny mpiara-miasa aminay, Brian Downard, dia namantatra fomba manokana hamoronana votoaty mamorona mpanjifa ao amin'ny infografika vaovao, Fomba 8 hamoronana atiny mamorona mpanjifa:
Mamorona atiny ho an'ny fanentanana ny marika SY ho an'ny varotra - Aza mamorona votoaty fotsiny amin'ny tanjona hisarika ny mpamaky, hamorona atiny hanova ny fitarihana sy ny varotra koa.
Valio amin'ny atiny ireo fanontaniana "mividy mialoha" - Mamorona atiny manodidina ny fanontaniana manokana izay azonao matetika amin'ny vinavinanao sy ny mpanjifanao.
Mamorona atiny sy loharano "evergreen" bebe kokoa - Safidio am-pahendrena ireo lohahevitrao, mba tsy hahavery ny lanjan'izy ireo ny atiny volana vitsivitsy aorian'ny namoronana azy.
Ampitomboy ny atiny AZY amin'ny dokam-barotra voaloa - Amporisiho ny atin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika sy ny "retarget" ireo mpamaky ireo miaraka amin'ny atiny mifantoka amin'ny fiovam-po.
Mamorona olona afa-po afaka manana ara-batana - Ampitomboy tsara ny lanjan'ny votoatinao amin'ny alàlan'ny fametrahana azy ao anaty PDF azo sintomina.
Mametraha “elanelam-pahalalana” tian'ny olona hofenoina - Tokony hanome lanja ny atiny anao raha mbola mamela "cliffhanger" izay mahatonga ny olona te hahafantatra bebe kokoa.
Amboary ny volavolanao lalao miaraka amin'ny sary matihanina - Ny ankamaroantsika dia tsy mahay mamorona. Fa kosa tadiavo sy mividiana sary sy sary namboarina mialoha ho an'ny atiny.
Ampidiro ny matanjaka, marani-tsaina antso ho amin'ny hetsika - Aza avela mihantona ny mpamaky anao, omeo hetsika mazava izy ireo mba hahafahan'izy ireo mandray ny dingana manaraka.
Mazava ho azy, raha mila fanampiana ianao dia aza hadino ny mijery an'io Kilasy mahafinaritra an'i Brian na afaka manakarama ianao ny masoivohon'ny votoatintsika!
Tags: Brian Downardmiantso amin'ny asafamoronana atinyhevitra momba ny votoatyContent Marketingfampiroboroboana ny atinymamorona mpanjifactaCustomersfamolavolanaEvergreenatiny maharitra mandrakizaysarydokam-barotra karamatalohan'ny-mividyfamolavolana matihaninalevitra fanapahan-kevitraatiny fivarotana